CADWorx Plant Design Course – Edu Myanmar | Online Classes | Center Classes
EduGate Engineering Training Center
EduGate Computer, Engineering and Career English Training School was founded by Aung Myint Myat(Ko Andrew) and cofounded by Aung Kyaw Soe(Man Win) in 2014. The main differentiation with other schools is that we are focusing on Technical and Volcational Education and Training(TVET) programmes in order to help the national development and capacity building of Myanmar. No.30A, 4th Floor, U Tun Lin Chan St., Hlae Dan
099 6540 1222
Ko AndrewFounder @ www.elearningmyanmar.com
ဒီ သင်တန်းက အကောင်းဆုံး ထိရောက်မှု၊ လုပ်နိုင်စွမ်းအားတွေကို ရရှိအောင် CADWorx Plant ရဲ့ feature တွေနဲ့ utility တွေကို ဘယ်လို သုံးရမယ်ဆိုတာကို သင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အထင်ကြီးလောက်စရာ ကောင်းတဲ့ engineering pipework design solution တွေကို ဖန်တီးဖို့ AutoCADနဲ့ CADWorx ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Demostrate လုပ်ပြတာတွေ ပါဝင်မယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ အရမ်းကို ရိုးရှင်းတဲ့ feature တွေကို စပြောပြမယ်။ ပြီးတော့ plant model အသေးလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီးတော့ ပိုခက်ခဲတဲ့ command တွေကို အသုံးပြုနည်းတွေ ရှင်းပြမယ်။ သင်တန်းသင်နေရင်းနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ရာ GA(General Arrangement)တွေ၊ isometrics တွေနဲ့ အခြား လိုအပ်တဲ့ output တွေ ထုတ်နိုင်ဖို့ feature တွေကို အသုံးပြုသွားကြမယ်။
CADWorx Plant Design Course မတက်မီ What is CADWorx ဆိုတာကို သိလိုပါက အောက်ပါ လင့်ကနေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်ဖို့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ Autocad 3D ကို ကောင်းမွန်စွာ၊အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တဲ့ knowledge ရှိထားသင့်တယ်။ process piping system နဲ့ပတ်သတ်လို့ အခေါ်အဝေါ်တွေ(terminology)နဲ့ သူတို့ရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ယေဘူယျ နားလည်ထားရမယ်
Principal Aim of this course
ဒီသင်တန်းကို ပြီးသွားတာနဲ့ သင့်အနေနဲ့
3D Piping Model တွေကို တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်။ 3D Model ကနေ 2D Layout Drawing တွေ ထုတ်နိုင်ရမယ်။
ISOGEN ကို သုံးပြီးတော့ automatic isometrics တွေ ထုတ်နိုင်ရမယ်။
Default CADWorx Plant specification တွေကို ပြင်နိုင်ပြီါ်တော့ လိုအပ်တဲ့ specification အသစ်တွေ ထုတ်နိုင်ရမယ်
HVAC နဲ့ SteelWork module တွေကို သုံးပြီးတော့ HVAC, steel frames, stairs, ladder နဲ့ handrail တွေကို ဖန်တီးနို်င်ရမယ်။
Equipment module ကို သုံးပြီးတော့ pump နဲ့ vessel တွေကို သုံးနိုင်ရမယ်။
GA မှာ သုံးဖို့ အတွက် Bills of Material တွေ ထုတ်နိုင်ရမယ်။
Database တစ်ခုကို အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ ဒီ database ဟာ modelထံက data တွေနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်။ existing database ကို drawing တွေလာချိတ်နို်င်ရမယ်။
After completing the CADWorx Plant Design online training, students receive the CADWorx Plant Design training certificate from EduGate Engineering School